Labsiin yeroo muddamaa furmaata bu'uraa hin ta'u: Prof. Gabruu Taarraqee - BBC News Afaan Oromoo
Labsiin yeroo muddamaa furmaata bu'uraa hin ta'u: Prof. Gabruu Taarraqee
Goodayyaa suuraa Profeesar Gabruu Taarraqee
Ogeessi seenaafi qorataan walitti bu'insaa Piroofeesar Gabruu Taarraqee waggaa 122 dura bu'uurri Aduwaarratti kaa'ame har'a diigamaa jiraachuu mala soda jedhu qabu.
Har'allee akka tokkummaa biyyattiif yaaddofnuuuf sababa kan ta'u "hojiin manaa hin hojjetiin maal ta'inna?" jechuun gaafatu.
"Dhaabni biyya bulchaa jiru dimokiraasiifi bilisummaa ukkaamsuun warren yaada hammataa hinqabneef haala mijeessee biyyattii balaarra waan buuseef, keessaafi alaan siyaasa hin taane warri deemsisan akka jiraatan taasisuus'' eeraniiru.
Heera Hojiirra Hin ooliin
Piroofesar Gabruun mootummoota sadiifi heerota mootummaa sadii dabarsaniiru. Akka ilaalchaatti heerriifi sirni federalaa amma hojiirra jiru kan foyyaa'e ta'uu ni dubbatu. Haata'u malee akkaataa Pirezedaantiin duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa dhiyeessaniin foyyaa'uu akka qabu ni amanu.
Akka isaan jedhanitti, heerri Itoophiyaa bu'uurri isaa gaarii ta'us hojiitti jijjiiruu irratti garuu gaaffii keessa kan galudha. Fakkeenyaaf, qoodinsi qabeenyaafi aangoo mootummoota naannoofi federaalaaf heerichi kenne cabaa akka ture kaasu.
Keesumaa A L I bara 1993 keessa gargara ba'uu ABBUT (Adda Bilisa Baasaa Tigiraay) booda muummichi ministiraa duraanii Mallas Zeenaawwii aangoo hunda dhuunfatanii waan qabataniif tureef mirgiifi aangoon naannolee xiqqaateera.
Mormiin A L I bara 2008 Oromiyaatti dho'e al takkaan kan hin uumamne ta'uu kan dubbatan Prof. Gabiruun, heerri mootummaa hojiirra ooluu dhabuu, paartiin tokko waan hunda ol aantummaan qabachuu, karaan ittiin uummatichi mirga isaa kabachiifatu dhiphachaa dhufuuf akkasumas karaan ittiin miidhama isaa fuulduratti ba'ee dhageessifatu cufachuu isaa akka ka'umsaatti kaasu.
Prof. Gabruun qulqullina barnootaa irratti gaaffii qabaatanis, waggota 27 darban keessa baballachuu dhaabbilee barnootaa ol aanoo ni dinqisiifatu.
"Haata'u malee, waggaa waggaan barattoonni kumaatamaan eebbifamanis, dingadeen biyyattii humna baratee eebbifame kana baachuu hin dandeenye. Kanaaf, hoji dhabdummaan dabaleera," jedhu.
Waantootni uumaman kun Dhaabbannii Dimokiraasummaa Uummata Oromoo (DHDUO)n akka of qoratuuf isa kakaaseera kan jedhan Prof. Gabruun, garee Obbo Lammaa Magarsaatiin gaggeessitoota miira uummataa dhaga'anidha, rakkoo uummatichaa hiikuufis yaalaniiru jedhu.
Tarkaanfii sodaarraa madde
Paartiileen afran 'of sakkataaneerra waan ta'eef furmaata yeroo isaa eeggate kennina' jedhanii irra dedeebi'anii kadhatanis' uummatichi kanaan tole hin jenne, jedhu Prof. Gabruun.
Akka uummanni tarkaanfii Addichaatti hin gammannee agarsiiftuun, Labsii Yeroo Muddamaa irra deebi'amee sababiin itti labsamu jiraachuu isaati.
"Labsichi waan nama ajaa'ibudha, sodaarraa kan madde natti fakkaata" kan jedhan Prof. Gabruun rakkoo jiruuf furmaata bu'uuraa hin ta'u jedha.
Uummata, dhaabbilee mormitootaa, beektotaafi qorattoota siyaasaa waliin mariyachuu akka furmaataatti kaa'u.
"Furmaanni qaama hunda kan hammate ta'uu qaba. Uummanni dhimma biyya isaarratti mariyachuu qaba. Seerri yoo ba'es kan hojiirra oolchu uummatichadha. Taankiifi meeshaa waraanaa hiriirsisuun haala jiru hin jijjiiru," jedhan.
"Rakkoo tokkummaa biyyattiin gaaffii keessa galche ADWUIn qophaa isaa furuu hin danda'u," jechuun ibsa.
Paarlaamaan kaadiroota ADWUI qofaan guutamuufi qaamni haqaa hin jiru sadarkaa jedhamurra ga'amuu kan dubbatu Prof. Gabiruu "kan komatamu hoji-raawwachiiftuu qofa osoo hin taane walumaa galatii Addichadha" jedhan.
Itti gaafatamummaafi iftoomina tokko malee biyyattii waggoota 27 dhaaba gaggeessedha jechuun qeeqee, wal amanuu dhabuun gidduu paartiiwwaniitti uumame rakkooma paartii biyya bulchuuti, jedhan.
Komaandi poostiin labsii yeroo muddamaa akeekkachiise